Guurka dhex mara Soomaalida iyo ajaanibta | Biyoguurenews.com
Home Wararka Guurka dhex mara Soomaalida iyo ajaanibta
Todobaadkan waxaa aad loo hadal hayey guur dhex maray weriye u shaqeeya TVga dalka Kenya ku yaalla ee KTN iyo gabar Soomaaliyeed.
Baraha bulshada ayaa aad loogaga sheekaysanayey guurka weriya Ben Kitili iyo Aamina Muudeey oo ay muddo saaxiibbo ahaayeen, ilmana isu dhaleen.
Maalmo ka hor ayey si rasmi ah u aqal galeen, xaflad ay dad yar oo ah saaxiibadood iyo xubnaha qoysaskooda ka soo qayb galeen.
Laakin dood xoog leh ayey baraha bulshada ka dhalisay, xilli ay Soomaali badan qurbaha ku nool yihiin.
Muddadii qarniga ahayd ee u dambaysay, Soomaalida waxaa la sheegaa in ay si tartiib ah u dhex galayeen mujtamacyada kale, guurka Ben iyo Aaminana su’aasha ugu weyn ee uu keenay ayaa ah sababta ay Soomaalidu guurarka qaarkood ugu arkaan kuwo caadi ah, halka kuwo kalena ay u arkaan in ay lid ku yihiin dhaqanka.
Aragtiyahaas waa kuwo ku salaysan qof kasta iyo fikirkiisa, laakin halkan waxaan ku eegaynaa qaar ka mid ah dadka magaca leh ee ajaanibta qaba.
Waxaa ugu horreeya Sahra Maxamed Cabdulmajiid oo loo yaqaanno Iimaan. Waa gabar Soomaali ah oo dharka xayeysiisa.
Waxay mar ka soo muuqatay heesta ‘Remember the time ee Michael Jackson oo sidoo kalena uu ku jiray jilaaga caanka ah ee Eddie Murphy.
Waxay is qabeen heesaagii geeriyooday ee Ingiriiska u Dhashay, David Bowie, 1992 – 2016.
Wakhtigaas ka hor, waxay u dhaxday Spencer haywood oo ahaa cayaartoy Maraykan ah oo Kubadda kolayga cayaari jiray, kaasoo ay is qabeen 1977 – 1987.
Iminka waa 63 jir, waxayna dhashay laba gabdhood.
Saabriin Dhoorre (Sabrina Dhowre) waa 29 jir asalkeedu Soomaali yahay, laakinse ku dhalatay, kuna barbaartay waqooyiga Ameerika.
Waxay muddo wada noolaayeen, una alkuman tahay jilaaga caanka ag ee Britain u dhashay Idiris Elba.
Mihnadda Saabriin waa jilaa iyo xayeysiinta dharka. Waxay 2014 ku guulaysatay tartanka quruxda gobolka Vancouver ee dalka Canada.
Saabriin iyo Idiris weli ma aysan shaacinin taariikhda ay aqal gali doonaan.
Dadka magaca ku dhex leh Soomaalida ee ku faraxsan guurkooda ajaanibta waxaa ka mid ah Dr Xasan Shire Sheekh oo madax ka ah ha’yadda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee bariga Afrika.
Waxaa u dhaxda Stellah Akatukunda. Maalmo ka hor ayaa labadooda magaalada Muqdisho loogu sameeyey xaflad weyn oo ay yimaadeen asxaab iyo madax ka tirsan dawladda Soomaaliya.
Guursiga ajaanibta ma aha wax ku cusub nolosha dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan marka laga eego dhanka isdhexgalka mujtamacyada dega xeebaha oo ka duwan kuwa deegaannada aan xeebaha lahayn ee u badan reer guuraaga.
Doodaha qaar in ay noqdaan hadal hayn weyn waxaa saamaxay baraha Bulshada oo ah meelo ay dadku ra’yigooda ku soo bandhigaan, laakin dhanka kale, waxaa yar ama meesha ka maqan tixgelinta dookha qofka, iyo in loo arko inuu isagu yahay qofka leh go’aanka noloshiisa.
Previous articleSidee Madaxwayne Biixi Loogusoo Dhaweeyay Degmada wadaamo,goo
Next articleXisbiyada Mucaaradku Ma Frikaran wadhadal lala Yeesho dawlada xamar ,dalkan Madaxwyna Loo Doortay